Amagcisa edigital amangalisayo achukumisa umhlaba | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ubugcisa buhlala butshintsha ukusuka kwi-analog ukuya kwinxalenye yedijithali kwaye yile nto besiyazi ngaphambili Imizobo ibe yimizobo, yintoni namhlanje imifanekiso ibe imiboniso yehaptic kunye nemizobo yokubhala yedijithali Ngokubhekiselele kwimiboniso yegalari yezobugcisa, bathathe inyathelo lokuguquka kumaphepha ewebhu anokubonisa umxholo wabo kubantu kwihlabathi liphela.
Kwiminyaka emininzi yokupenda, eyaziwa ngokuba bubugcisa be ubume bomzobo, umxube wombala usetyenzisiwe ngokudibeneyo nezinye izinto ezibophayo, le kuphela kwendlela yokumela iinyani kwinto ethe tyaba.
Kodwa bekude kube ukuzalwa kokufota kwenzeka kwaye kunokuthiwa ngaphandle kokubonakala kwayo, ukuba ukupeyinta kuyaqhubeka kunendawo ebalulekileyo kubugcisa, nangona oko akuthethi ukuba ii-pigment ziyaqhubeka zisetyenziswa ngendlela ebonakalayo kwaye njengoko itekhnoloji ikhula kwaye ivumela ubuchule obutsha ukuba bukhule, ukupeyinta kuguquke fumana i- Ifomathi yedijithali.
Oko sikwaziyo njenge ubugcisa bedijithali ngoku uphezulu kwaye konke kubulelwa kubazobi abakwizinga eliphezulu abamkhuselayo bamenza inxenye yabo.
Ngale ndlela, ubugcisa bedijithali bunezinto ze-3D, imizobo epeyintwe ziirobhothi, imidlalo yevidiyo kunye neemovie, kodwa kweli nqaku siza kuthetha kuphela malunga nezo amagcisa asasebenzisa iindlela eziqhelekileyo okanye zesintu ukwenza umzobo, ke siya kuthi sikhankanye amagcisa edigital amangalisayo achukumisa umhlaba.
Amagcisa edigital amangalisayo amshiya engathethi
UKenn Yap waziwa njengomzobi okwaziyo ukubona ikamva okanye ubuncinci ophume kwintelekelelo kwaye ubanjiwe ngesimbo sokupeyinta esisetyenziswa ngokubanzi DeviantArt kwaye yintoni umzobo wedijithali.
USteve McGhee ngomnye umzobi okwaziyo ukubona ikamva, nangona luhlobo lwekamva ongafuniyo ukuba lwazi naye. Dystopia igama kwaye ukongeza koku uyakwazi ukuzoba umfanekiso ngayo.
Ngaphandle koku, ayisiyiyo yonke into emele ikamva, kodwa nangona kunjalo, ikholaji eyenziwe nguValentina Brostean kwaye eli gcisa liyakwazi ukuphinda lichaze umbono wokuba ekuqaleni yayilelo lokubhalwa ephepheni, elinokuphumelela ngempumelelo enkulu kwaye ukusebenzisa ubuchule kuphela kwindawo yedijithali. Oku kuthetha ukuba ikholaji, into equlathe ukusikwa, ayisenziwa ephepheni kuphela.
Nkqu nezo ziqweqwe zeLitye leLitye, ezazenziwe ikakhulu ngeefoto, ziye zakwazi ukwamkela ubugcisa bedijithali Umzobi uEvgeny Parefnov kunye nesimbo sakhe sokuzoba.
Omnye wamagcisa amangalisayo edigital achukumisa umhlaba nguTara Phillips kwaye usibonisile oko ubuchule obuqhelekileyo Ukuzoba zisaphila kwihlabathi ledijithali ngesixhobo sobugcisa besantya. Yintoni ipeyinti, i-canvas kunye nebrashi iikhonsepthi zothando eziza kuthi engqondweni zihamba nento ye-easel eyenziwe ngomthi kwisitudiyo esikhanyisiweyo.
Kodwa namhlanje ezi zinto zazisaziwa ngaphambili ukuba azisafuneki ube nakho ukwenza imisebenzi yobugcisa, kuba kukho izixhobo eziphathwayo ezinetekhnoloji esivumela ukuba senze imidwebo ngaphandle kwendawo nexesha.
Nangona konke, ukupeyinta kwedijithali kukwafuna iseyile, kodwa ngomahluko esinokuba nawo ongapheliyo, njengoko kusenzeka ngeebrashi kunye nepeyinti, kodwa sikhumbula ukuba ziyafikeleleka njengombane ofunekayo ukuze ikhompyuter ihlawulise.
Ukwenza imizobo yedijithali kulula kakhulu kuba asizukuba neengxaki kwimizobo, ukongeza kwi ngonqakrazo olunye unokufikelela kwizixhobo ezininzi zokuzoba kwaye yinto engadingi xesha lingako ukugqiba umsebenzi wobugcisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amagcisa edigital amangalisayo achukumisa umhlaba
I-13 ezilula zokuchukumisa ezinokunika iziphumo ezingcono zokuhlela iifoto kwi-Photoshop